UManuel Altolaguirre kunye no-Emilio Prados. Ezinye iimbongi ze 27 | Uncwadi lwangoku
UMiguel Altolaguirre kunye no-Emilio Prados
UManuel Altolaguirre kunye no-Emilio Prados bekukho iimbongi ezimbini ifumanise Yeyakhe Isizukulwana se-27. Ukugqunyelelwa ngamanye amahlakani avela kuloo mbinana yeengcibi ezenzileyo, umgangatho wayo nawo awunakuphikiswa. Namhlanje ndiyabakhumbula kwaye ndibangqinela ngemibongo yabo emi-6.
1 UManuel Altolaguirre
1.1 3 imibongo
2 U-Emilio Prados
2.1 3 imibongo
Uzalelwe eMalaga ngo-1905, ngaphambi kokuba abe neminyaka engamashumi amabini ubudala, waseka eyokuqala Imagazini yemibongo apho bekukho ukusebenzisana kweembongi ezaziwayo kunye nabanye oogxa bakhe kwisizukulwana sakhe. Waya eFransi naseNgilani, apho wazenzela khona umshicilelo wakhe.
Xa ebuyela eSpain, wahlala neRiphabliki ngexesha lemfazwe yamakhaya kwaye ukuphela kwembambano wemka ngokuqinisekileyo. Yayisungulwa kwi Mekhsikho kwaye yanikezelwa kwicala lesinema. Vula 1959, ngexesha lotyelelo eSpain, wasweleka engozini Yemoto phakathi Burgos.
Phakathi kwemisebenzi yakhe eyaziwayo yile Ukuhlala ndawonye y Ubomi bemibongo.
Awukho wedwa ngaphandle kwam.
Ubulolo bam bukukhapha.
Ngubani kuni nobabini othanda izwe lakhe?
Isibhakabhaka nolwandle kuyasimanya.
Iziqithi kunye namafu okulibala
Bohlula mna nawe.
Ngaba ukukhanya kwam kuyabuthabatha ubusuku bakho?
Ngaba ubusuku bakho buyacima iminqweno yam?
Ngaba ilizwi lakho lingena ekufeni kwam?
Ukufa kwam kuphelile kwaye kufikelela kuwe?
Emilebeni yam iinkumbulo.
Emehlweni akho ithemba.
Andindedwa ndedwa ngaphandle kwakho.
Ubulolo bakho buhamba nam.
Wawuyedwa njani ngaphakathi?
Xa ndikrobe imilebe yakho
itonela ebomvu yegazi,
Kumnyama kwaye kubi, ibitshona
kude kube sekupheleni komphefumlo wakho.
Xa ukwanga kwam kwangena,
ubushushu balo kunye nokukhanya kwalo kwanika
kwinyama yakho emangalisiweyo.
Ukusukela ngoko iindlela
ezikhokelela emphefumlweni wakho
awufuni ukuba bamshiye.
Zingaphi iintolo, iintlanzi, iintaka,
zingaphi ii-caresss kunye nokuwanga!
Uthando, uzibonakalise ...
Uthando uyazibonisa nje
ngento oqala ngayo kum,
ukuba uwuphange umphefumlo wam
kudyobha isibhakabhaka esicocekileyo
Ndivale iingcambu zam
yimfama kwaye ngaphandle kwamagqabi ibunzi elihamba ze
ogcina ubuncwane kunye nethemba.
Kwakhona wazalwa eMalaga ngo-1899, neminyaka eli-15 wemka waya kufunda kwisikolo ekuhlalwa kuso Madrid apho yangqamana nayo UJuan Ramon Jimenez. Emva kwexesha wayehlala kwindawo ahlala kuyo abafundi apho wadibana khona UDali noGarcía Lorca. Wachitha phantse unyaka esibhedlele ngenxa ye- isifo semiphunga Apho ke wathabatha ithuba lokufunda nokubhala. Xa uchacha, ndabuyela eMalaga apho wayethathe inxaxheba ekusekweni kwe Imagazini yeLitoral. Kwakunjalo umhleli woomatshini bokushicilela base Mzantsi, eyamzisela udumo kwihlabathi liphela. Waya eMexico kwaye wasweleka apho.
Umsebenzi wakhe wahlulwe izigaba ezithathu zinikezelwe iingxaki zentlalo, indalo kunye nokuzazisa. Ezinye izihloko zezi Izitampu ezithandathu zepuzzle o Ukulila egazini.
Kubonakala ngathi cwaka
Kubonakala ukuzola phambi kwamehlo akho,
Apha, eli nxeba - akukho mida yamanye amazwe-,
Namhlanje uthembekile kumgangatho wakho ozinzileyo.
Inxeba lelakho, umzimba apho livuleke khona
Yeyakho, isomelele kwaye icacile. Yiza, chukumisa,
yehla, usondele. Ngaba uyayibona imvelaphi yakho?
ukungena ngamehlo akho kule nxalenye
ngokuchasene nobomi? Ufumene ntoni?
Into engeyoyakho ngokusisigxina?
Yilahla ikrele lakho. Phosa iingqondo zakho kude.
Kuza kuwe ngaphakathi kwakho oko ukunikileyo,
Kwakungeyakho kwaye kuhlala kuyinto eqhubekayo.
Eli nxeba lingqina: akukho mntu ubhubhileyo.
Into endifuna ukuyazi
kulapho ndikhoyo ...
Ndiyazi ukuba andisoze ndiyazi
Apho ndiya khona ndiyazi ...
Apho ndiya khona,
Ndifile, andazi ukuba, ndiyaphila,
into endandifuna ukuba yiyo.
Namhlanje ndingathanda ukuyibona;
Imizimba yethu yashiywa
ubuso ngobuso, ezingenanto.
Phakathi kwemizimba yethu emibini,
Enjani yona inzonzobila ingalibalekiyo!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ababhali » UManuel Altolaguirre kunye no-Emilio Prados. Ezinye iimbongi ezingama-27
UFrancisco García Pavón. I-Centennial kunye nePlinio kunye namazwi eRuidera